पाठेघरको ट्युमर - Enavanari
डा. आशा सिंह
ईशान बाल तथा महिला अस्पताल,
पाठेघरको ट्युमर के हो ?
पाठेघरको ट्युमर भन्नासाथ प्रायः मानिसहरु अत्तालिने गर्छन्, कतै यो क्यान्सर त होइन । खासमा ट्युमर जहाँ पनि हुनसक्छ तर बढीमात्रामा पाठेघरको ट्युमर हुने गरेको छ । खासमा कुनै पनि शरिरमा अन्य मासु पलाउनु अथवा अस्वाभाविकरुपमा मासु बढ्नुलाई ट्युमर भनिन्छ । ट्युमर भन्नेवित्तिकै सबै मानिसको मानसिकतामा आउने कुरा हो, क्यान्सर तर सबै ट्युमर क्यान्सर हुँदैनन् । ट्युमर दुइ किसिमका हुन्छन्, म्यालिगनेन्ट र नन म्यालिगनेन्ट ।
म्यालिगनेन्ट ट्युमर चाहिँ क्यान्सर ट्युमर हो र नन म्यालिग्नेट ट्युमर नन्क्यान्सर ट्युमर हो । धेरैजसो नन क्यान्सरस ट्युमर हुन्छ । अहिले महिलालाई ट्युमर सुन्नेवित्तिकै मलाई क्यान्सर हुन्छ कि भन्ने भय हुन्छ तर डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । सबै ट्युमर क्यान्सर नहुने भएपनि क्यान्सर छ कि छैन भनेर टेस्टहरु भने गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि ओभिरियन्ट ट्युमर हुनसक्छ । जुन दुइ थरिको हुन्छ । म्यालिगनेन्ट र नन म्यालिगनेन्ट ओरियन्ट पनि धेरै थरि हुन्छ । बडीको ट्युमर भनेको अर्को फाइब्रोइट हुन्छ । फाइब्रोइट ट्युमर नन म्यालिगनेन्ट हो । पहिलो कुरा सबैले के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने ओभरीको ट्युमर भनेर धेरै कुरा आइरहेको छ । अल्ट्रासाउण्ड गर्दा पानीको फोका छ भने यसमा अन्य टेस्ट आवश्यक हुन्छ ।
ट्युमर क्यान्सर हुने कुरा के के मा भरपर्छ ?
-उमेरमा फरक पर्छ , ४० वर्ष काटेको महिलाको ट्युमर सानो भएपनि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।
-साइज ६ सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो भयो भने पनि क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ ।
-पानीको फोका सँगै अन्य सोलिड कम्पोनेन्ट पनि छ भने क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ ।
यो प्रायः महिलामा सानो अथवा ठूलो ट्युमर देखिन्छ तर यसको पनि देख्नेवित्तिकै अप्रेशन गराउनुपर्दैन । सानो साइज छ तर दुखिरह्यो, महिनावारीमा पेट दुख्ने, धेरै रगत बग्ने अथवा साइज एकदमै ठूलो भयो वा कुनै समस्या आयो भनेमात्र अप्रेशन गर्दा हुन्छ । प्रायःजसो ट्युमरभन्दा सर्भेक्सको क्यान्सर ट्युमर नै हुन्छ ।
के कारण हुन्छ ट्युमर ?
-कम उमेरमा विवाह गर्नु
-धेरै बच्चा जन्मा-उनु
-धुम्रपान तथा मध्यपान गर्नु
-आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समाजमा सम्भावना बढी हुन्छ
-युट्राइग फ्राइबब्राइट भनेको सर्भाइकल ट्युमर हो जुन उल्टो बच्चा पाउने, कम बच्चा पाउने अथवा ढिलो बच्चा पाउने जसमा पनि हुन्छ ।
-ओभेरियन्ट ट्युमर पनि बच्चा कम पाउनेलाई हुने सम्भावना हुन्छ । यो दुवै ट्युमर वंशाणुगत पनि हुन्छ ।
-ओभेरियन्ट ट्युमरको केही लक्षण नै नदेखिन सक्छन् । ठूलो साइजमा पुग्दासमेत पेन पनि नहुने हुन सक्छन् ।
-पाठेघरको ट्युमर क्यान्सर होस् या नन क्यान्सर, कहिले काहीँ धेरै पेट दुख्ने, बटारिने हुनसक्छ ।
-महिनावारीमा धेरै रगत बग्ने, सेतो पानी बग्ने ।
-पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा पनि सेतो पानी धेरै बग्ने गन्हाउने हुनसक्छ ।
-सरसफाई तथा खानेकुरामा ध्यान दिने ।
-पाठेघरको मुखको पानी जाँच्ने अर्थात् प्याब्स मेड टेस्ट समय समयमा गराइरहने ।
-शरिरिक सम्बन्ध भएको ३ वर्षपछि प्याब्स मेड टेस्ट गर्ने ।
-समय समयमा अल्ट्रासाउण्ड गर्ने तथा स्वास्थ्य चेकअप गर्दै गर्ने ।
-विवाहित महिलाले सुइ लगायो, पिल्स खायो भने पनि त्यसले ओभरी र युट्राइङ ट्युमरबाट बचाउँछ । अण्डा बन्न दिँदैन र त्यसले इन्फेक्सन हुन दिँदैन ।